Yocingo ICO izinhlelo - Blockchain Izindaba
Yocingo ihlele ngezigidigidi zamaRandi dollar ICO ngoba cryptocurrency wengxoxo
Ezibetheliwe imiyalezo uqalisa yocingo uhlela ukwethula yayo blockchain platform kanye cryptocurrency bomdabu, powering izinkokhelo ku uhlelo lwayo lokusebenza wengxoxo nangale. Ngokusho kwemithombo eminingi lapho usukhulumile TechCrunch, le "yocingo Vula inethiwekhi" (TON) kuyoba entsha, 'Isizukulwane sesithathu' blockchain nge amakhono aphakeme, ngemva Bitcoin futhi, kamuva, Ethereum kwavula indlela.
Ukwethulwa Sizoxhaswa nge omkhulu kokuqala Coin Umnikelo, nge kungafiki yangasese pre-yokuthengisa esukela emakhulwini ezigidi, engase okwenza kube omunye ICOs ngobukhulu kuze kube manje. Demand is eliqhutshwa yokuthi kunokuba ICO okuvela uqalisa fresh, Yocingo kuyinto ezimisiwe imiyalezo platform ezisetshenziswa emhlabeni wonke.
Ukwamukela cryptocurrency homegrown kunganikeza yokukhokhelana ukuzimela yocingo sika ezinkulukazi kunoma yimuphi uhulumeni noma ebhange - into wabaSunguli kanye CEO Pavel Durov is ukuhahela eyaziwa emva zimali wathatha phezu inkampani yakhe yokugcina, inethiwekhi Russian yezenhlalakahle VK. Durov akaphendulanga imizamo TechCrunch sika eziningana ukuxhumana naye mayelana nalesi indaba.
Ithuba lokuba kube khona cryptocurrency ngaphakathi uhlelo lokusebenza yokutholwa kabanzi nawo njengomnyango mkhulu kakhulu.
Uma ukhokha cryptocurrency inikwa amandla yi ngaphakathi yocingo, abasebenzisi lingadlula okwamukelwayo izimali uma kuthunyelwa izimali eqele kwamanye amazwe, ukuhambisa tibalo imali ngasese sibonga ukubethela kuzodlondlobalisa ukusetshenziswa kedatha, ukuletha micropayments ukuthi yikho kakhulu eliphezulu Imali credit card, futhi nokuningi. Yocingo isivele de empeleni waba ukuxhumana nesiteshi cryptocurrency umphakathi womhlaba, kokwenza ikhaya zemvelo ukuze uhlamvu yayo siqu futhi Blockchain.
Ukuthengisa a ton of cryptocurrency
Yocingo Kuyaqondakala ukuthi ucabangela ukhulisa kakhulu ngendlela $500 million ukudayiswa pre-ICO at ibe inani olunikezwa uhla $3 billion $5 bhiliyoni. Nokho, labo izibalo angashintsha phambi ICO, okungase zingagcwaliseki ngokushesha njengoba Mashi. Lezo zibalo kwakuyokwenza kube mhlawumbe enkulu mfihlo yangasese aphakamisele usuku ngemva Tezos, okuyinto babeka phezu $230 million ngo-July.
A pre-ukudayiswa i ICO kuyinto cap ubuncane ezitshaliwe (kwesinye isikhathi izaphulelo) ukuheha abatshalizimali enkulu ('Imikhomo') ngaphambi ebanzi ukudayiswa eyiphepha zimali okudayisa. umphakathi, isigaba okudayisa i ICO ivame ukukhulisa kancane ngoba kukhona umsila omude wabantu ukutshala imali ezishisiwe encane. Kodwa phambi ulayishe ICO nge utshalomali yesikhungo usenza simethembe zimali okudayisa.
Labo zimali pre-ukudayiswa kungadingeka ukubeka ubuncane Thenga-in $20 abayizigidi ezingu uma siphelela abangekho emibuthaneni Durov wangaphakathi. Imithombo ithi ukuthi ICO kuzodinga yangempela Fiat lwemali njenge aseMelika ukuze Thenga-e, hhayi Bitcoin noma Etere njengoba abanye ICOs kufanele usuku.
Phezulu uqimba yesikhungo amafemu utshalomali baye bazwakalisa isithakazelo, kodwa Durov kuthiwa uqaphele mukela imali yabo. Omunye ngokuqinile namahemuhemu baye lalifuna ukuba a yokwabiwa pre-ukudayiswa kuyinto Mail.Ru Group (phambilini obuwaziwa DST), eyasungulwa emigre Russian Yuri Milner. Okhulumela DST akazange uphendule uphenyo lwethu mayelana nale ndaba. Ngokuthakazelisayo, Mail.Ru Group yesikhwama ukuthi ngagcina ukuthenga inkampani Durov lokugcina VK.
Ukuqonda yocingo Vula Network
umqondo Durov sika ukuqalisa blockchain entsha ngokuphelele, usebenzisa yocingo sika 180 million abasebenzisi njengoba i-rocket fuel amandla phambili ku ukwamukelwa kuqhakanjiswe off cryptocurrency nokwenza yocingo, ngempumelelo, a kingmaker yezinye cryptocurrencies, ngenxa isikali akhona.
Ngokusho iphepha yocingo emhlophe ukuthi TechCrunch has ibuyekeze izingxenye, cryptocurrency kuzosuswa ngokuthi "Gram" futhi kungase uthole kuqhakanjiswe ngokushesha ukutholwa kokubheka lokusebenza wengxoxo yocingo sika.
Imithombo ithi Durov unqume ukuhlanganisa kokubili ingqalasizinda eyodwa futhi endlalekile, njengoba ingosi yokuxhumana ngokuphelele endlalekile akusho sikala okushesha njengokungena eyodwa esesikhundleni tincenye letitsite yinye, yingakho kungani yocingo idinga ukuba ngumnikazi blockchain ayo.
Ukuhambisa kuya ekubeni inkundla blockchain endlalekile singangibulala izinyoni ezimbili ngetshe elilodwa ngoba yocingo. Kanye udala cryptocurrency umnotho wequbula ngaphakathi kohlelo lokusebenza, kwakuyodingeka vimbela ke ukuhlasela futhi emangalelwa isizwe-uthi ezifana Iran, lapho manje ebangela 40% Iran inthanethi traffic kodwa engekho okwesikhashana ivinjiwe phakathi imibhikisho lonke emelene nohulumeni.
Yocingo odlale obucayi sekulinganisa zezombusazwe isenzo ukuzama nokugcina abasebenzisi bayo kuleli zwe, ukucisha ezinye iziteshi ngokubiza ukuwa uhulumeni, ngenkathi ugcina abanye evulekile.
nge TON, Yocingo ihlose ukuthuthukisa Umbuso cryptocurrency ezisekelwe lifana WeChat, okuyinto iqhakazile ku: Odlula lokusebenza wengxoxo kanti uba yokukhokha ezenzakalelayo ezosetshenziswa eziningi eChina.
Nakuba izinkokhelo zingenziwa ngokushesha kakhulu WeChat for ezihlukahlukene services, uhlelo uhlala eyodwa kakhulu. A platform endlalekile ezifana TON kungenzeka ukulondeka okwengeziwe nokuqinisela.
Imithombo bathi yocingo uhlela ukuvumela abasebenzisi ukubamba kokubili yocingo sika lwemali kanye Fiat lwemali endaweni isikhwama kungafiki.
Kukhona futhi unjiniyela ecosystem ekhona yocingo uyakhile bazungeza, lapho bot namasevisi ahlinzekwa Onjiniyela third-party. Nalapha, lapha TON ayengakwenza, ngemcondvo, underly konke umthuthukisi uletha yocingo.
Kwi 132 ikhasi iphepha elimhlophe, Yocingo uye ayehlose ezine-isigaba:
"TON Amasevisi" Kuyoba nesigcawu amasevisi third-party kwanoma yiluphi uhlobo eyenza smartphone efana interface friendly zezinhlelo zokusebenza endlalekile futhi izivumelwano smart.
"TON DNS" iyisevisi bokunikeza amagama abantu ofundekayo-akhawunti, izivumelwano smart amasevisi inethiwekhi ISIZINDA. Nge TON DNS, ekufinyeleleni kumasevisi usabalalise kungaba sengathi "ubuka iwebhusayithi kwi-World Wide Web."
"TON Izinkokhelo" kuyinto nesigcawu micropayments futhi inethiwekhi micropayment isiteshi. It ihlose isetshenziselwe "osheshayo off-chain value Ukudluliselwa phakathi kwabasebenzisi bot kanye nezinye izinsizakalo". Izivikelo kuncike ohlelweni zenzelwe ukuqinisekisa ukuthi lezi ukudluliselwa "zimi ephephile njengoba ku-chain ukuthengiselana".
I "TON Blockchain" sizofaka okuyinhloko iketango 2-ku-the-amandla ka-92 blockchains ohambisana. isici sayo enhle kakhulu ukuthi uyoba "Infinite Sharding Paradigm" ukufeza scalability. Ngakho, TON blockchains siphokophela ukuba akwazi "ukuhlukanisa ngokuzenzakalela uphinde uhlangane ukufaka ushintsho kuhlelo e umthwalo". Lokhu kungasho amabhlogo ezintsha elakhiwe ngokushesha futhi "Ukungazi kwamaKristu igama elithi emigqeni emide isiza ukugcina kuthengiselana kubiza ongaphakeme, ngisho noma kwamanye amasevisi usebenzisa yesikhulumi babe bakamalalahlengezela ethandwa ".
Luphinde aqukethe "Hypercube Instant yomgudu" yakhelwe ngakho blockchain singalondoloza yephuka ngisho njengoba ikhula. ubufakazi Its esigxotsheni ndlela bafinyelele ekuvumelaneni ngokusebenzisa okufana olandelwayo we 'WaseByzantium Fault Ubekezela', futhi okwandisa ijubane nokusebenza. Futhi uyophinde asebenzise 2-D ledgers Distributed. Lokhu kusho ikhule TON amabhlogo esisha esivumelekile phezu nobe nguwaphi emabhuloki ukuthi abangu kungase kutholakale ukuthi ayilungile uma sigwema noma ikuphi izimfoloko ezingadingekile. Ngamanye amazwi, TON uhlose ukuba 'self-ukuphulukiswa'.
wesithathu blockchain isizukulwane TON izozuswa olusekelwe ashukumisayo 'ubufakazi sokuhlushwa' kuvikelwe amaqembu amaningi ngezinga eliphezulu wokubekezelela iphutha. Luphinde ukusingatha isitoreji se-ID, izinkokhelo kanye izinkontileka smart. Ngakho, esikhundleni sokuncika ubufakazi umsebenzi ukudala imali yayo, Yocingo ngeke bathembele entsha, kancane indlela amandla-hogging kwemayini cryptocurrency kuka original Bitcoin indlela.
Isimangalo ukuthi azokwazi inombolo kakhulu kunabantu zokukhokhelwa, emhlabeni 1 abayizigidi ezingu ngomzuzwana. Ngamanye amazwi, efana izifiso yephrojekthi Polkadot aphume Berlin - kodwa i base ifakiwe ka 180 abantu abayizigidi ezingu-. Lokhu kwenza kube i 'interchain' nge okuthiwa 'sharding ashukumisayo'.
I white paper futhi kwenza amaphesenti kucace ukuthi ezine supply Grams (200 abayizigidi ezingu Grams) ngeke zigcinelwe ukuthuthukiswa ithimba yocingo nge inkathi yeminyaka emine Vesting. Yocingo usehlela siligcine 'okungenani 52 amaphesenti "bomhlaba wonke ukuphakelwa kukagesi endaweni Grams cryptocurrency ukuze awuvikele ukuhweba zokucabangela kanye nokugcina nokuvumelana nezimo. Okusele 44 amaphesenti udayiswa kokubili ukudayiswa zomphakathi kanye nezizimele.
Lwemali izofakwa ohlwini Ukuhwebelana bangaphandle esetshenziswa ngaphakathi kohlelo lokusebenza le yocingo.
Isikhathi ohlakaniphe, kwikota yokuqala ka-kulonyaka uzobona kwethulwa incwadi sangaphandle ID Secure, kulandele i-MVP ka TON. Ukwethulwa yocingo Wallet waphawulelwa Q4 2018, kanye kudalwa emnothweni TON ezisekelwe ayikwazanga ukuqalisa e Q1 2019. Ezinye izindaba zika-Services TON sokuba nilandele Q2 2019.
Abanye emphakathini mfihlo ahlale uyangabaza TON. "Ngicabanga nje lena indlela CEO sika ukwenza imali yocingo, ngokuyisisekelo,"Kusho uJackson Palmer, umsunguli ekuseni cryptocurrency Dogecoin.
Thumela Previous:Blockchain Izindaba 8 Januwari 2018
Thumela Landelayo:Blockchain Izindaba 9 Januwari 2018